Semalt Expert: Ahoana no fomba hahazoana ny Marketing Content momba anao?
Ny raharaham-barotra tsirairay dia mila drafitra ara-barotra mba hahatongavana amin'ny mpanjifa. Amin'ny trangan'ny e-varotra dia mampiasa programa isan-karazany ny orinasa mba ahafahana mahita fahita amin'ny Internet. Ireo fomba fiasa izay ampiasain'ny orinasa dia ny Search Engine Optimization (SEO) sy ny Social Media Marketing (SMM) - precio hosting. Ny raharaham-barotra sasany dia mampiasa ny fivarotana amin'ny Internet mba hahitana tsara ny SERP. Ny marketing-votoaty izao dia fomba iray isaky ny raharaham-barotra manomboka manomboka. Ny sasany amin'ireo orinasa miorina tsara dia mahazo tombontsoa maro avy amin'ny fahaiza-manaon'ny marketing.
Amin'ny lafiny sasany, ny varotra ao amin'ny votoaty dia mety samy hafa amin'ny SEO. Noho izany antony izany dia lafo vidy izany ary mety handany vola fanampiny. Rehefa mamolavola ny teti-bola ianao, dia mety hanontany tena momba ny antony tokony handinihanao rehefa manantena hahazo valiny tsara ianao any aoriana.
Jason Adler, Semalt Customer Success Manager, dia manolotra ireto fomba manaraka ireto hanaraha-maso ny fiverenanao amin'ny vola (ROI):
Fahatakarana ny filànao ara-barotra
Tsy ilaina ny milaza fa mba hahombiazana dia zava-dehibe ny mahatakatra ny zavatra ilain'ny raharaham-barotra. Ohatra, ny SEO mahomby dia mitaky sivana mety ary koa ireo SEO fampiroboroboana mahomby, izay mahatratra ny tanjona mifanaraka amin'izany. Ho an'ny e-varotra, mety tsy maintsy mametraka tanjona voalohany sy faharoa ianao. Ny tanjon'ny Kilonga dia ahitana lafiny toy ny fivarotana, fivoarana ary ny isan'ny fitsidihana aterineto.
Ny fitaovana an-tserasera sasantsasany dia manolotra fomba mivantana fanaraha-maso ny fidirana amin'ny tranokala. Ohatra, ny Google Analytics dia fitaovana mahafinaritra ampiasaina hanaraha-maso ny fifamoivoizana aty amin'ny tranokalanao. Ohatra, afaka manangana fivarotana varotra ianao, izay ahafahanao manangona vaovao sarobidy. Ireo tahirin-kevitra ireo dia mety ho fitondrantena toy ny fampisehoana ara-barotra sy ny ROI amin'ny fanentanana Content Marketing. Fanentanana dokambarotra marobe maro dia mety miteraka lozam-pifamoivoizana eo amin'ny fomba fisainan'ny vaovao. Maro ireo fitaovana sy plugins izay hita ao amin'ny ankamaroan'ny fitantanana ny fifandraisana dia afaka manatsara ny ezaka SEO anao amin'ny fitondrana ny tombontsoa azo avy amin'ny marketing.
Ny famakafakana ny data sy ny metrics dia tena zava-dehibe
Ny ankamaroan'ny fitaovana fitantanana votoaty dia ahitana fitaovana maro, izay afaka manangona angona sy fanadihadiana. Tena zava-dehibe ny famakafakana ny angona. Azonao atao ny mahafantatra ny fisafidianana na manara-maso ny fiantsoana ary mahazo fomba fijery manan-danja momba ny asan'ny orinasa. Maro ny rindrambaiko fitadiavana antso, izay afaka manampy ny orinasa hitantana ny fitarihana. Teknolojian'ny SEO maro no mikendry ny fanivanana ireo mpitsidika mba hahazoana menaka amin'ireo izay manana tanjona ambony indrindra amin'ny fampivoarana mivarotra. Ohatra, ny sasantsasany amin'ireny rindrambaiko ireny dia manome hevitra momba ny famoronana votoaty. Azonao atao ny mahafantatra ny pejy, izay teo aloha, na teo aorian'ny fiantsoana. Ity fanazavana ity dia manana fomba fijery mahomby momba izay tian'ilay mpamafy ary manitsy ny fanitsiana ilaina amin'ny adin'ny fanentanana. Ny mpivarotra sasany dia miezaka ny manamboatra ROI amin'ny fanentanana dokambarotra.
Ho an'ny orinasa e-varotra tsirairay hahomby, ny fahaiza-manao ara-barotra dia tokony ho mahomby ary mahavokatra. Ny iray amin'ireo fomba tena ilaina amin'ny fiarovana izany dia amin'ny alalan'ny fampiasana teknika ara-barotra mavitrika. Ny fitazonana ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny vola ampiasanao dia mety ho sarotra. Na izany aza dia azonao atao ny mifehy sy manara-maso ny fandrosoana amin'ny fampiasana ireo fomba fampiharana ao amin'ity torolalana ity.